Xubno ka tirsan maamulka Gal-Mudug oo weerar lagu Dilay – Radio Daljir
Diseembar 4, 2015 6:24 b 0
Somalia, December 04, 2015-(Daljir)_ Weerar hubeysan ayaa xilligii salaadda Jimcaha ka dhacay Gaalkacyo, waxaana lagu qaaday gawaari ay la socdeen dad ka soo jeeda Koonfurta magaalada, iyadoona uu sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh.
Mid ka mid ah xildhibaanada maamulka Gal-mudug oo lagu magacaabo Maxamed Xuseen Tahliil “Calool-geel”, ganacsade Daahir Godo Godo “Aqwaan” iyo Nabadoon Muxudiin Sheekh Xuseen, oo ka soo amba baxay Garoonka Gaalkacyo, kuna sii jeeday Koonfurta magaalada ayaa wadada loo galay sida la sheegay.
Weerarkani, ayaa waxaa lagu dilay ganacsade Daahir Godo Godo, halka ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen Xildhibaan Calool-geel iyo Nabadoon Muxudiin Sheekh Xuseen.
Lama sheegin cida ay tahay dablan dan hubaysan ee weerarka soo qaaday iyo halka ay kasoo jeedaan.
Xubnahaan, ayaa qayb ka ahaa dadaalada xalka loogu raadinaayo dagaalka Gaalkacyo, iyadoona la weeraray xilli loo soo diray in ay ka qayb qaataan dadaalada furinta dagaalka looga qaadaayo Ciidanka Galmudug.